Hello Nepal News » रोनाल्डोभन्दा मेस्सी दोब्बरले अघि !
रोनाल्डोभन्दा मेस्सी दोब्बरले अघि !
स्पेनिस बार्सिलोनाबाट खेलिरहेका अर्जेन्टिनी फरवार्ड लिओनल मेस्सी र इटालियन युभेन्टसबाट खेलिरहेका पोर्चुगिज क्रिस्टियानो रोनाल्डोबीच फुटबलको दुनियाँमा चर्को प्रतिस्पर्धा छ । उनीहरूबीच खेल कौशल, शैली, उपाधिमा मात्रै नभएर गोल र अन्य रेकर्डमा पनि उत्तिकै चर्को प्रतिस्पर्धा छ ।
फुटबलको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गर्ने ‘ओप्टा’ले हालै सार्वजनिक गरेको एक रेकर्डअनुसार बार्सिलोनाका मेस्सी युरोपका टप–५ लिगमा लामो दूरीबाट सबैभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडी हुन् । उनले आफ्ना खास प्रतिस्पर्धी रोनाल्डोलाई पनि पछि पारेका छन् ।
बक्सभन्दा बाहिरबाट बढी गोल गर्नेमा मेस्सी सबैभन्दा अगाडि रहेका छन् । ‘ओप्टा’ ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०१३ यता मेस्सी लामो दूरीबाट धेरै गोल गर्ने खेलाडी हुन् । २०१३ यता बक्स बाहिरबाट उनले कूल ४५ गोल गरेका छन् ।
सूची हेरौं :
लिओनल मेस्सी (बार्सिलोना) – ४५ गोल
फिलिपे कोउटिन्हो (बार्यन म्युनिख) – २४ गोल
क्रिस्टियानो रोनाल्डो (युभेन्टस) – २३ गोल
क्रिस्टिएन एरिक्सन (टोटनह्याम) – २२ गोल
मिरेलाम पियानिच (युभेन्टस) – २१ गोल
प्रकाशित मिति ७ भाद्र २०७६, शनिबार १२:५८